Tourism in Zimbabwe | Fortune of Africa Zimbabwe
Tourism is Zimbabwe’s fastest-growing industry. The country offers a large variety of scenery, one of the African continent’s finest and largest concentrations of wildlife, a perfect climate (an average of 7 hours of sunshine daily throughout the year).Places of interest include the Victoria Falls (one of the 7 wonders of the world), Hwange National Park, Kariba, Gonarezhou National Park, Eastern Highlands, the Great Zimbabwe Monument, and Nyanga.
The Ministry of Tourism aims to develop and manage policy programmes and strategies that enhance sustainable development and growth of the tourism and hospitality industry
The Zimbabwe Tourism Authority (ZTA)
This is an entity mandated by the Government of Zimbabwe to promote travel and tourism to Zimbabwe.
Information about tourism in Zimbabwe has been summarized to include the following;
Harare International Airport Status
Tourist arrivals in Zimbabwe